ဒူဒူကြီး: MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil မှ OWS oily water separator
MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil မှ OWS oily water separator
MARPOL သို့မဟုတ် MARPOL 73/ 78 ဟာ Marine Pollution ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကို၊ အတိုခေါါတာ ဖြစ်ပြီး၊ အပြည့်အစုံကတော့ International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 ဖြစ်ပါတယ်။ မူလရေးဆွဲစဉ်က ပင်လယ်ပြင်မှာ သွားလာ ခုတ်မောင်းနေတဲ့၊ သဘော်တွေကနေ ဆီအပါအဝင်၊ အမှိုက်သရိုက်၊ အညစ်အကျေးတွေနဲ့ မီးခိုး ငွေ့တွေကို၊ အတတ် နိုင်ဆုံးလျှော့ချစွန့်ပြစ်ခြင်းဖြင့်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ကိုကာကွယ်ဖို့၊ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
MARPOL Convention သဘောတူညီချက်ကို၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့မှာ စတင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၈မှာ ဖြည့်စွက်ချက်တွေကို၊ ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ MARPOL 73/ 78 Regulation ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့ မှာအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 သဘောတူညီချက်ကို၊ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Azerbaijan, Austria, the Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burma, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, The Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, North Korea, South Korea, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
MARPOL 73/ 78 Regulation ကိုအပိုင်း (၆) ပိုင်းခွဲခြားထားပြီး၊ Annex တွေလို့ခေါါပါတယ်။ အဲဒီ့ Annex တွေ ကတော့
၁။ Annex I - Oil
၂။ Annex II - Noxious Liquid Substances carried in Bulk
၃။ Annex III - Harmful Substances carried in Packaged Form
၄။ Annex IV - Sewage
၅။ Annex V - Garbage နဲ့
၆။ Annex VI - Air Pollution တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Annex I ဟာ (၁၉၈၃) အောက်တိုဘာ (၂) ရက်နေ့မှာ၊ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပြီး၊ Annex II ကတော့ (၁၉၈၇) ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့ မှာစတင်အသက်ဝင်ခဲ့ကာ၊ လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၁၅၀) ကလိုက်နာကျင့်သုံးနေပါတယ်။ oil ဆိုတဲ့ ဆီကို၊ organic oils, mineral oil နဲ့ synthetic oils ရယ်လို့ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ် ထားပေမယ့်၊ MARPOL Annex I အရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ oil ကတော့၊ crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse တွေနဲ့၊ refined products တွေဖြစ်ပါတယ်။
Annex II အရ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Noxious Liquid Substances တွေကတော့၊ Category X၊ Category Y၊ Category Z နဲ့ Other Substances ဆိုပြီး၊ Category ၄ မျိုးနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ category အုပ်စုတွေကိုအသေးစိတ်မရှင်းတော့ပဲ၊ သဘေ်ာတွေ အထူးသဖြင့်၊ bulk carrier နဲ့ tanker သဘေ်ာတွေ၊ cargo hold cleaning၊ cargo tank cleaning နဲ့ cargo hold သို့မဟုတ် ballast tank တွေ ကို de-ballasting လုပ်ပြီး၊ ပင်လယ်ပြင်ဇီဝသက်ရှိတွေကို သေဆုံးမှု၊ ထိခိုက်မှုစတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊ လူသားတွေရဲ့ ကျမ်းမာရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါါစေခြင်း စတဲ့ သက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါါစေနိုင်တဲ့စွန့်ပစ် "ရေ" လို့၊ အကျမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Annex III ဟာ (၁၉၉၂) ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှာ၊ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ harmful substances ဆိုတာတွေကတော့ IMDG Codes International Maritime Dangerous Goods အရသတ်မှတ်ထားတဲ့၊ ၁။ explosives၊ ၂။ gases၊ ၃။ flammable liquids၊ ၄။ flammable solids၊ ၅။ oxidizing substances၊ ၆။ toxic and infectious substances၊ ၇။ radioactive materials၊ ၈။ corrosive substances နဲ့ ၉။ miscellaneous dangerous substances စတဲ့၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်အမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။
Annex IV ဟာ (၂၀၀၃) စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ၊ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Sewage ကို၊ သဘေ်ာရှိရေချိုခန်း၊ အိမ်သာ၊ သဘေ်ာရဲ့ ဆေးရုံခန်း နဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့ မှစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အညစ်အကြေး နဲ့ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ရေများရယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
Annex V ဟာ (၁၉၈၈) ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့မှာ၊ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ garbage ဆိုတာ ကတော့၊ အစားအသောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ပိုလျှံပစ္စည်းနဲ့ အညစ်အကြေးများဖြစ် ပြီး၊ ရေနေသတ္တာဝါ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ပိုလျှံပစ္စည်း နဲ့ အညစ်အကြေးများမပါဝင်ပါဘူး။
Annex VI ဟာ၊ (၂၀၀၅) မေလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ၊ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှု တနည်း အားဖြင့် အိုဇုန်းလွှာကို ထိခိုက်စေမယ့် ဓါတ်ငွေ့များလွှင့်ထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Air Pollution ဆိုတဲ့၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိစ္စကို အလေးအနက်ထားပြောဆိုလာကြပြီး၊ MEPC Marine Environment Protection Committee ရဲ့ MEPC 176(58) ဆိုတဲ့ Circular ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်ကို၊ Marpol Annex VI မှာ Regulation 12 နဲ့ Regulation 14 တို့ကိုဖြည့်ပြီး၊ (၂၀၁၀) ဇူလိုင် (၁) ရက်နေ့က စလို့ အသက်ဝင်ပါတယ်။
Annex VI - Regulation 12 အနေနဲ့ Ozone Depleting Substances ပါဝင်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီ ODS Record မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို သိမ်းဆည်းထားကာ၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ အဖွဲ့ အစည်းများမှ စစ်ဆေး မှာဖြစ်ပါတယ်။
Annex VI - Regulation 14 အနေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ လောင်စာ Fuel Oil ရဲ့ Sulphur limits ကို ထပ်မံလျှော့ချ သတ်မှတ်တာဖြစ်ပြီး၊ SECA လို့ ခေါါတဲ့ Special Emission Control Area တွေမှာ low sulphur fuel oil လောင်စာကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၀) ဇူလိုင် (၁) ရက်နေ့ကစလို့ sulphur limits ကို 1.00% m/m၊ အထိ လျှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို low sulphur fuel oil ကိုအသုံးပြုရာ ကနေ (၂၀၁၅) ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကစလို့0.10% m/m အထိထပ်မံလျှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။
SECA လို့ ခေါါတဲ့ Special Emission Control Area တွေကတော့၊ Mediterranean Sea, Baltic Sea, Black Sea, Red Sea, Gulfs area, Gulf of Aden, Antarctic area, North West European Waters, Oman area of the Arabian Sea နဲ့ Southern South African waters ဒေသမှ ရေပြင်ဧရိယာဒေသ များဖြစ်ပါတယ်။
MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရ engine room ထဲက၊ oily water တွေကိုစွန့်ပြစ်တဲ့ အခါ၊ OWS oily water separator ကိုအသုံးပြု ဖြတ်သန်းပြီးမှ၊ ပင်လယ်ပြင်ကိုစွန့်ထုတ်ရပါတယ်။ တနည်း အားဖြင့် oily water ကြောင့်၊ ပင်လယ်ပြင်ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်ပေါါစေဖို့၊ တားဆီးကာကွယ် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ OWS တွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုမဖော်ပြခင်၊ oily water စွန့်ပြစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေကို အရင်ဆုံး ဖော်ပြပါမယ်။
ရေနံတင်သဘေ်ာ Oil Tankers နဲ့ အခြားသဘေ်ာများ Other than Oil Tankers ဆိုပြီးအုပ်စု (၂) ခု ခွဲ ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ (က) Class 1 Oily water Separator equipment, (ခ) Discharge water oil content monitor (ဂ) Sludge storage equipment (ဃ) Automatic discharge stop device နဲ့ Restricted sea areas ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးများပါရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(က) Class 1 Oily water Separator equipment ဆိုတာကတော့ oily water separator, oily water separator pump, strainer, discharge water collecting device တို့ကို၊စုပေါင်းခေါါဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) Discharge Water Oil Content Monitor ဆိုတာကတော့၊ oily water separator ကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ စွန့်ထုတ်မယ့် ရေထဲမှာ ဆီပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့ sensor ကရိယာဖြစ်ပြီး၊ 15 ppm unit လို့လည်းခေါါဆို ပါတယ်။
(ဂ) Sludge Storage Equipment ဆိုတာကတော့၊ sludge tank နဲ့ sludge piping system တို့ကို၊ စုပေါင်းခေါါဆို တာဖြစ်ပါတယ်။
(ဃ) Automatic discharge stop device ဆိုတာကတော့၊ discharge water oil content monitor မှ ရေထဲမှာ ဆီပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့အခါ၊ စွန့်ထုတ်မယ့် ရေထဲမှာ ဆီပါဝင်မှု 15 ppm ကျော်တာနဲ့ စွန့်ထုတ်မှုကို အလိုအလျှောက်ရပ်တန့်စေတဲ့ စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
automatic discharge stop device အဖြစ်၊ 15 ppm ထက်ကျော်တာနဲ့၊ ၁။ oily water separator pump ကိုအလိုအလျှောက်ရပ်တန့်စေခြင်း နဲ့ ၂။ စွန့်ထုတ်မယ့်ရေကို 3-way solenoid valve တလုံးမှ ဖြတ်သန်းစေပြီး၊ ဆီပါဝင်မှု 15 ppm မရှိမချင်း overboard valve မှတဆင့်စွန့်ထုတ်နေပြီး၊ အကယ်၍ 15 ppm ထက်ကျော်ပါက၊ Overboard Valve ရဲ့ Piping System သို့ မသွားစေပဲ၊ sludge tank သို့မဟုတ် bilge tank အတွင်းသို့၊ အလိုအလျှောက် ပို့ဆောင်စေခြင်း ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုး တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Restricted sea areas ဆိုတာကတော့၊ Mediterranean Sea area ဆိုတဲ့ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၊ Baltic Sea area ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ဒေသ၊ Black Sea area ပင်လယ်နက်ဒေသ၊ နဲ့ Antarctic Sea area အန္တာတိကပင်လယ်ဒေသ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Restricted sea areas နဲ့၊ SECA လို့ ခေါါတဲ့ Special Emission Control Area များသတ်မှတ်ပုံမတူကြောင်းသတိပြုမိပါတယ်။
Annex I - Oil အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့သက်သေခံလက်မှတ်၊ IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate နဲ့၊ Annex VI - Air Pollution အတွက် ထုတ်ပေးတဲ့သက်သေခံ လက်မှတ်၊ IAPP International Air Pollution Prevention Certificate အတွက်၊ ဧရိယာသတ်မှတ်ချက်များဟာ မတူပါဘူး။
(က) - Restricted sea areas တွေမှာသွားလာမယ့် ရေနံတင်သဘေ်ာ Oil Tankers
၁။ GRT တန်ချိန် ၁၀၀ အထက်မှ ၄၀၀ အထိ ရေနံတင်သဘေ်ာ တွေမှာ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor နဲ့ (ဃ) automatic discharge stop device တို့ပါဝင် တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၂။ GRT တန်ချိန် ၄၀၀ အထက်မှစ၍ ရေနံတင်သဘေ်ာ တွေမှာတော့ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ့ (ဃ) automatic discharge stop device တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
(ခ) - Restricted sea areas မဟုတ်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ၊ သွားလာမယ့် ရေနံတင်သဘေ်ာ Oil Tankers
၁။ GRT တန်ချိန် ၁၀၀ အထက်မှ ၄၀၀ အထိ ရေနံတင်သဘေ်ာ တွေမှာ၊ (က) Class 1 oily water separator equipment တမျိုးတည်းသာ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၂။ GRT တန်ချိန် ၄၀၀ အထက်မှ တန်ချိန် ၁၀၀၀၀ အထိရှိတဲ့၊ ရေနံတင်သဘေ်ာ တွေမှာတော့ (က) Class 1 oily water separator equipment နဲ့ (ဂ) sludge storage equipment တွေကို၊ တတ်ဆင် ထားရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၃။ GRT တန်ချိန် ၁၀၀၀၀ အထက်မှစ၍ ရေနံတင်သဘေ်ာ တွေမှာတော့၊ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content Monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ့ (ဃ) automatic discharge stop device တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
(ဂ) - Restricted sea areas တွေမှာသွားလာမယ့် အခြားသဘေ်ာများ Other than Oil Tankers
၁။ GRT တန်ချိန် ၁၀၀ အထက်မှ ၄၀၀ အထိ၊ အခြားသဘေ်ာများမှာ (က) Class 1 oily water separator equipment တမျိုးတည်းသာတတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၂။ GRT တန်ချိန် ၄၀၀ အထက်မှစ၍၊ အခြားသဘေ်ာများမှာ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ့ (ဃ) automatic discharge stop device တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
(ဃ) - Restricted sea areas မဟုတ်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ၊ သွားလာမယ့် အခြားသဘေ်ာများ Other than Oil Tankers
၁။ GRT တန်ချိန် ၁၀၀ အထက်မှ ၄၀၀ အထိ အခြားသဘေ်ာများမှာ၊ (က) Class 1 oily water separator equipment တမျိုးတည်းသာ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၂။ GRT တန်ချိန် ၄၀၀ အထက်မှ ၁၀၀၀၀ အထိ အခြားသဘေ်ာများမှာ၊ (က) Class 1 oily water separator equipment နဲ့ (ဂ) sludge storage equipment တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၃။ GRT တန်ချိန် ၁၀၀၀၀ အထက်မှစ၍၊ အခြားသဘေ်ာများမှာ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ့ (ဃ) automatic discharge stop device တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားရှိရမယ်လို့ categories ကို၊ ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားပါတယ်။
OWS ဟာ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံကူးသန်းသွားလာနေ တဲ့၊ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းသဘေ်ာတွေမှာ၊ မရှိမဖြစ် တတ်ဆင်အသုံးပြုရမယ့် စက်ပစ္စည်းကရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း လောကမှာ MARPOL 73/ 78 Regulations တွေကြောင့်၊ ပင်လယ်ပြင် နဲ့ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်လာ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နည်းဥပဒေ တစ်ခုအသက်ဝင်စေဖို့၊ အာဏာတည်စေဖို့အတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းတွေကိုလည်း သဘေ်ာဆိုက်ကပ်ရောက်ရှိရာ တိုင်းပြည်တွေမှ၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် Port State Control လို၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေကနေ ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ပြဌာန်းထားတဲ့ နည်း ဥပဒေများနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါ၊ သဘေ်ာကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ခွင့်မပြုပဲ၊ ရပ်တန့်စေခြင်း detaining ပြုလုပ်ခြင်းစတဲ့၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကနေ မရိုးမသားပြုလုပ်ကာ ဆီများကို၊ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း စွန့်ပြစ်ခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားများ တွေ့ရှိပါက ငွေဒါဏ်အပြင် ယခုအခါမှာ တာဝန်ရှိအင်ဂျင်နီယာ များကို ထောင်ဒါဏ်အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ကနေ (၅) နှစ်အထိ အပြစ်ပေးအရေးယူ ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လာ ပါတယ်။
OWS ကိုအသုံးပြုပြီး၊ ပင်လယ်ပြင်အတွင်းသို့၊ စွန့်ထုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ shore connection ကိုအသုံးပြုပြီး၊ ကမ်းခြေ သို့မဟုတ် အခြားသဘေ်ာတစီးသို့ လွဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိသဘေ်ာအတွက် ချောဆီအပါ အဝင်၊ လောင်စာဆီများကိုလက်ခံရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဆီ နဲ့ပက်သက်တဲ့ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်တိုင်း၊ MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil Regulation No. 17 အရ၊ Oil Record Book မှာ မှတ်တမ်းရေးသွင်းရပါတယ်။
Oil Record Book ကို Part 1 Machinery Space Operation နဲ့ Part2Cargo Space Operation ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပြီး၊ တန်ချိန် ၁၅၀ အထက်မှစ၍ ရေနံတင် သဘေ်ာများ အားလုံး နဲ့ တန်ချိန် ၄၀၀ အထက်မှစ၍၊ အခြားသောအမျိုးအစား၊ သဘေ်ာများအားလုံးမှာ Part 1 Machinery Space Operation Oil Record Book မှာ၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းရပါတယ်။ Part2Cargo Space Operation ကတော့၊ ရေနံတင် သဘေ်ာများရဲ့ Cargo ကုန်နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ မှတ်တမ်းရေးသွင်းဖို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိသုံးစွဲနေကြတဲ့၊ OWS အားလုံးနီးပါးဟာ gravity system နဲ့ filtration system တို့ကို၊ အသုံးပြုကာဆီ နဲ့ ရေကို၊ ခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်း (၂) ခုပါဝင်ပြီး ၁။ oil separating compartment နဲ့ ၂။ filtering compartment တို့ဖြစ်ပါတယ်။ oil separating compartment မှာ coarse separating compartment နဲ့ fine separating compartment ဆိုပြီး (၂) ပိုင်းပါရှိပါရှိတဲ့အပြင်၊ oil collection compartment လည်းတတ်ဆင် ပါရှိ ပါတယ်။
oily water mixture ဆီရောနေတဲ့ရေတွေဟာ bilge pump သို့မဟုတ် OWS pump မှတဆင့် ပထမ အဆင့်ဖြစ်တဲ့၊ coarse separating compartment အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပါ တယ်။ bilge pump သို့မဟုတ် OWS pump တွေဟာ reciprocating pump သို့မဟုတ် gear pump တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဝင်ရောက်လာတဲ့ oily water တွေထဲမှာရောနှောပါဝင်နေတဲ့ ဆီ မော်လီကျူးအချို့ဟာ ရေနဲ့ နိုင်းစာရင် lower density သိပ်သည်းဆပိုနည်းတာကြောင့်၊ အပေါါမှာရှိနေပြီး၊ oil collection compartment အတွင်း ဝင်ရောက်သွား ပါတယ်။
Fig. catch plate
ကျန်ရှိနေတဲ့ oily water တွေဟာ၊ coarse separating compartment ကိုဖြတ်သန်းပြီးအထွက်မှာ oil separating compartment အောက်ခြေရှိ fine separating compartment ထဲကိုဆက်လက်ဝင်ရောက် ပါ တယ်။ fine separating compartment ကို stationary catch plate တွေ နဲ့တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ oily water ဟာ catch plate တွေကြား ဖြေးညှင်းစွာဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားရင်းနဲ့၊ ဆီဟာ plate မျက်နှာ ပြင်မှာကပ်ငြိပြီး၊ lower density သိပ်သည်းဆပိုနည်းတာကြောင့်၊ oil collection compartment အတွင်း ကို ဝင်ထပ်မံဝင်ရောက် သွားပါတယ်။ fine separating compartment မှာဖြတ်သန်းလာတဲ့ရေ မှာ ဆီ ပါဝင် မှု 100 ppm ခန့်ရှိနေ ပါသေးတယ်။
ဆီပါဝင်မှု ကို filtrating unit အတွင်းထပ်မံဖြတ် သန်းစေပြီး၊ လျှော့ချယူ ပါတယ်။ filtrating Unit မှာ stage (၂) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ပထမ stage ဟာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေ အတွင်းမှာရှိနေသေးတဲ့ solid particles တွေနဲ့ physical impurities တွေကို စစ်ထုတ်ဖယ်ရှားပါတယ်။ solid particles တွေနဲ့ physical impurities တွေဟာ၊ ပထမ stage ရဲ့ အောက်ခြေမှာ အနည်ထိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ stage မှာတော့ coaslescer ကိုအသုံးပြုကာ၊ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ oil molecules တွေကိုပေါင်းစုစေ ပြီး၊ အပေါါကိုဝေ့ကာတက်လာတဲ့ oil molecules တွေကို၊ collecting chamber အတွင်းမှာ ထပ်မံ စုပေါင်းစေ ပါတယ်။
coaslescer ဟာ ပျစ်ခဲတဲ့အရည် emulsions တွေကို၊ ခွဲခြားပေးပြီး၊ mechanical coalescers နဲ့ electrostatic coalescers ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ mechanical coalescers တွေကတော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင်၊ compressed air ကိုအသုံးပြုလို့ filters သို့မဟုတ် baffles တွေမှ တဆင့်၊ ခွဲခြားပေးတာ ဖြစ်ပြီး၊ oil and gas, Petrochemical နဲ့ oil refining industries တွေမှာ hydrocarbon liquid တွေနဲ့ ရေကို၊ ခွဲခြားပေးဖို့အများဆုံး အသုံးပြုကြ ပါတယ်။ electrostatic coalescers တွေကတော့၊ AC သို့မဟုတ် DC field current ကိုအသုံးပြုကာ၊ ခွဲခြားပေးပြီး crude oil ရေနံစိမ်း ထဲမှာ ရောနှောနေ တဲ့ ရေကို၊ ခွဲခြားဖို့အများဆုံး အသုံးပြုကြပါတယ်။
coaslescer ကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အခါ၊ ဆီပါဝင်မှုလုံးဝနီးပါးမရှိတဲ့ရေအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီး overboard valve ကနေပင်လယ်ပြင်သို့စွန့် ပြစ်ပါတယ်။ စွန့်ပြစ်နေစဉ်ကာလတလျှောက်မှာ၊ sampling water ကို၊ oil content monitoring unit သို့ပေးပို့ကာ၊ အကယ်၍ ဆီပါဝင်မှု 15 ppm ထက်ကျော်ပါက operation တခုလုံးကို အလို အလျှောက်ရပ်တန့်စေပါတယ်။
OWS ဟာ၊ MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရ၊ မဖြစ်မနေတတ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့၊ စက်ပစ္စည်း ကရိယာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Classification Societies တွေက၊ နှစ်စဉ်စစ်ဆေးကာ၊ IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရထုတ်ပေးတဲ့၊ IOPP Certificate ၊ SOLAS Regulation အရ ထုတ်ပေး တဲ့၊ SE Safety Equipment Certificate နဲ့ SR Safety Radio Certificate တို့မှာ၊ attached form တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ IOPP Certificate ရဲ့ attached form ကို၊ Form B, SE Certificate ရဲ့ attached form ကို Form E နဲ့ SR Certificate ရဲ့ attached form ကို၊ Form R လို့ခေါါပါတယ်။
Form B, Form E နဲ့ Form R မှာ၊ Regulation အရ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းကရိယာ များရဲ့ စာရင်း၊ အမျိုးအစား အတိအကျကိုဖော်ပြထားပြီး၊ Classification Societies အနေနဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေး တဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သဘေ်ာဆိုက်ကပ်ရောက်ရှိရာ တိုင်းပြည်တွေမှ၊ Port State Control လို၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေကနေ ရှောင်တခင်စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖော်ပြထားတဲ့ စက်ပစ္စည်း ကရိယာများ ထဲက တခုဟာပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ယူဆရင်၊ သဘေ်ာကိုဆက်လက်မောင်းနှင် ခွင့်မပြုတော့ပဲ၊ ရပ်တန့်စေခြင်း detaining ပြုလုပ်ခြင်းစတဲ့၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
OWS ရဲ့ overboard valve ကိုဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် ကမ်းခြေဧရိယာ port limit ထဲကိုဝင်ရောက်တာနဲ့၊ တစုံတယောက်က မဖွင့်မိစေရန်၊ lashing ချည်နှောင်ထားရပြီး၊ သော့ခတ်ကာ တာဝန်ရှိသူ အင်ဂျင်နီယာချုပ်မှ၊ သိမ်းဆည်းထားရသလို၊ OWS ရဲ့ Outlet သို့မဟုတ် overboard valve ရဲ့အနီး တဝိုက်မှာ၊ ခွင့်ပြုမိန့်တစုံတရာမရပဲဖွင့်ခဲ့ပါက၊ ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် သတိပေးစာရေးကပ်ထားရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်၊ သဘေ်ာကို ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် ကျောက်ချရပ်နားထားစဉ်မှာ IOPP Certificate အသစ် လဲလှယ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ OWS ကို၊ တာဝန်ရှိအဖွဲ့ အစည်းများမှ၊ စမ်းသတ်မောင်းနှင်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ စမ်းသတ်မောင်းနှင်ခြင်းကို၊ simulation test လုပ်တာလို့ခေါါပြီး၊ အမှန်တကယ် actual bilge water တွေကို၊ စုတ်ယူကာ OWS မှ၊ ဖြတ်သန်း စွန့်ပြစ်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ sea chest line တနေရာရာက၊ sea water ကို စုတ်ယူစေပြီး၊ OWS မှ၊ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင် ကာ flushing လုပ်ကြည့်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
flushing လုပ်တဲ့အခါ overboard valve ကိုဖွင့်ကာစမ်းသတ်လေ့ရှိပါတယ်။ 15 ppm Oil Content Monitor၊ 15 ppm Alarm Unit နဲ့ overboard လုပ်တဲ့ function တွေ တကယ်အလုပ်မလုပ်ဆိုတာထက်၊ OWS ကို၊ အမှန် တကယ်သုံးစွဲပြီး၊ ဆီတွေကို၊ ပင်လယ်ပြင်ထဲစွန့်ပြစ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကို၊ flushing လုပ်နေစဉ်မှာ sampling line မှ drain cock ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ်။
filtering compartment ရဲ့၊ ဒုတိယ stage ဖြစ်တဲ့၊ coaslescer unit မှာ၊ sampling line ကိုတတ်ထား တာမို့၊ sampling line မှ ကျလာတဲ့ sample water မှာ ဆီ နံ့ နံနေရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆီအရောင်ပေါက်နေ ခဲ့ရင် OWS ရဲ့ internal parts အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ၊ အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ရမယ့်၊ separating နဲ့ filtering function တွေကို၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်သလို၊ မရိုး မဖြောင့်သော သဘောနဲ့ Oil Content Monitor Unit ကို၊ by pass လုပ်ကာ၊ ဆီတွေကို၊ direct overboard ပင်လယ်ပြင်ထဲကို တိုက်ရိုက် စွန့်ပြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။
Fig. 15 ppm oil content monitor
flushing လုပ်နေစဉ်မှာ sampling line မှ drain cock ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊ sample water ဟာရေကဲ့သို့ယူဆရရင်တော့ oil content monitor unit အလုပ်လုပ်မလုပ်ကို၊ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးအဖြစ်၊ oil content ရဲ့ အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး၊ screw driver တချောင်းကို နှစ်ကြည့်လိုက်ရင်၊ oil content monitor မှာပြနေတဲ့ ppm reading ဟာမြင့်တက်လာပြီး၊ 15 ppm reading ကိုရောက်တာနဲ့၊ alarm Unit နဲ့ overboard လုပ်တဲ့ function တွေကို activate ဖြစ်စေပါတယ်။
အချို့ oil content monitor တွေမှာတော့ ppm setting ပြောင်းလဲခြင်းကို၊ push button switch ကို နှိပ်ကာ၊ parameter များကိုပြောင်းလဲနိုင်သလို၊ အချို့ oil content monitors တွေမှာ ppm setting switch အားလှည့်ခြင်း ဖြင့်၊ function တွေကို activate ဖြစ်စေပါတယ်။
15 ppm ကိုရောက်တာနဲ့၊ function တွေ activate ဖြစ်ခြင်းမှာ၊ OWS Pump ကို အလိုအလျှောက် ရပ်တန့်စေခြင်းနဲ့ စွန့်ထုတ်တဲ့ရေကို၊3Way solenoid valve တလုံးမှဖြတ်သန်းစေပြီး၊ overboard valve ရဲ့ piping system သို့မသွားစေပဲ၊ sludge tank သို့မဟုတ် bilge tank အတွင်းသို့၊ အလိုအလျှောက် ပို့ဆောင်စေခြင်းဆိုပြီး၊ (၂) မျိုးရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်3way solenoid valve ကိုမသုံးပဲ၊ overboard line အတွက် solenoid valve တလုံး နဲ့ sludge tank သို့မဟုတ် bilge tank အတွင်းကိုပြန်ပို့တဲ့ recirculating line မှာ၊ solenoid valve တလုံး တတ်ထား တာမျိုး လည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဆီပါဝင်မှု ပမာဏ 15 ppm အောက်မှာ overboard line မှ solenoid valve ဟာပွင့်နေပြီး၊ recirculating line မှ solenoid valve ကတော့ပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 15 ppm ထက်ကျော် သွားတဲ့ အခါ overboard line မှ solenoid valve ဟာ ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ recirculating line မှ solenoid valve ကပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် NC normally open solenoid နဲ့ NO normally close sloenoid တို့ကို parallel အပြိုင်တတ်ဆင်ထားခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
pump ကို အလိုအလျှောက်ရပ်တန့်နိုင်ပေမယ့်၊ bilge pump သို့မဟုတ်၊ OWS အတွင်းမှာ discharge pressure 1.2 ~ 1.6 Kg/ cm2 ခန့် ရှိနေတဲ့အခါ၊ OWS မှာ ဆီ အမှန် တကယ်ရှိနေပါက overboard valve ရဲ့ piping system ထဲကို၊ စီးဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ ပင်လယ်ပြင်ထဲကို "ဆီ" တွေထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့3way solenoid valve မှတဆင့်၊ sludge tank သို့မဟုတ် bilge tank အတွင်းသို့၊ အလိုအလျှောက်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ နည်းကိုသာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့3way solenoid တွေကို၊ pneumatically operated solenoid နဲ့ electrically operated solenoid ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုးတွေ့နိုင် ပါတယ်။
MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရထုတ်ပေးတဲ့၊ IOPP Certificate ရယ်၊ SOLAS Regulation အရ ထုတ်ပေးတဲ့၊ SE Safety Equipment Certificate နဲ့ SR Safety Radio Certificate ရယ်မှာ၊ Attached Form တွေပါဝင်သလို၊ သဘေ်ာအမျိုးအစား၊ တန်ချိန်နဲ့ သွားလာခုတ်မောင်းမယ့် ဒေ သပေါါမူတည်လို့ exemption ကင်းလွတ်ခွင့်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ Non-convention Ship သဘေ်ာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ရင်၊ IOPP, SE နဲ့ SR Certificateတွေအတွက်၊ exemption ရနိုင်ပြီး၊ Exemption Certificate အဖြစ်နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ Singapore Merchant Shipping Act Chapter 179, Section 143 အရ၊ (a) cargo ships of less than 500 tonnes propelled by mechanical means engaged on international voyages; (b) barges of any tonnage engaged on international voyages; (c) tanker of any tonnage engaged on 30 mile limit voyages or plying within the port. ဆိုတဲ့သဘေ်ာတွေနဲ့၊ SOLAS Regulation အရ in the course of their voyage, do not sail at distances of more than 20 miles from the nearest land လို့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေကို၊ Non-convention Ship သဘေ်ာတွေလို့၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းခရီး တွေသွားနေပေမယ့် တန်ချိန် ၅၀၀ အောက်သဘေ်ာတွေ၊ Barges တွေ၊ ရေနံတင်သဘေ်ာအမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့် Port Limit မိုင် ၃၀ အတွင်းသာသွားလာတဲ့ သဘေ်ာတွေ နဲ့ ကမ်းခြေနဲ့ မိုင် ၂၀ ထက်ပိုပြီး၊ မကွာပဲ သွားလာနေတဲ့ သဘေ်ာတွေဟာ၊ Non-convention Ship သဘေ်ာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာ၊ OWS ဟာမရှိမဖြစ်တတ်ဆင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ IOPP Exemption Certificate ရရှိထားတဲ့ Non-convention Ship တွေမှာတော့ 15 ppm unit ကို၊ display unit တခုအနေနဲ့၊ တတ်ဆင် ထားရှိဖို့ မလိုပါဘူး။ oil content ကိုတိုင်းတာဖို့ Capacitance Effect နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့၊ Sensor Prob အနေနဲ့သာ၊ တတ်ဆင်ထားဖို့သာလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး၊ OWS ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ function အားလုံး ကတော့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလို activate ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
oil content များတဲ့၊ oily water တွေနဲ့ Waste Oil Incinerator တတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိလို့၊ မီးမရှို့ဖြစ်တဲ့ sludge တွေကို၊ bilge holding tank၊ sludge tank နဲ့ dirty oil tank တွေမှာစုဆောင်းထားပြီး၊ shore facility ကိုသုံးကာ dispose စွန့်ပြစ်ရပါတယ်။ ဆီအညစ်အညစ်အကြေးတွေကို၊ ကမ်းပေါါစွန့်တဲ့ piping system တခုသီးခြားတတ်ဆင်ထားပြီး dirty oil pump ကနေစွန့်ပြစ်တဲ့အခါ၊ အသုံးပြုတဲ့ connection ကိုလည်း၊ international shore connection လို့ခေါါပါတယ်။
Image credit to : http://www.separationequipment.com, http://www.gec.jp
Posted by ဒူဒူကြီး at 20:06